Sajhasabal.com | Homeमलमास : 'नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नु पर्छ ?'
मलमास : 'नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नु पर्छ ?'
ज्योः पंडित विष्णुप्रसाद खनाल ।असोज २, काठमाडौं । मलमास चन्द्रमाको गति अनुसारको महिनाभित्र सूर्यको संक्रान्ति परेन भने यो एउटा अधिकमास हो। यसलाई मलमास भनिन्छ। प्रत्येक राशि, नक्षत्र, महिना आदिका स्वामी छन् तर अधिक मास अर्थात् मलमासको स्वामी छैनन्। यसकारण अधिकमासमा सम्पूर्ण शुभ, देव एवं पितृ कार्य वर्जित गरिएको हुन्छ।
यस वर्ष असोज १ गते ४:५९बजेबाट लागेपनि असोज २ गते शुक्रबारदेखि ३० गते शुक्रबारसम्म मलमास अथवा अधिकमास परेको नेपाल पञ्चाङ निर्णायक समितिले जनाएको छ। ज्योतिषीय गणनाअनुसार ३६५ दिनको वर्ष हुन्छ।
वर्षमा सौर र चान्द्रमास हुन्छन्। दुवैलाई समन्वय गर्न ३२ महिना १६ दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा मलमास वा अधिकमास आउँछ। एउटा औँसीदेखि अर्को औँसीसम्म सङ्क्रान्ति छैन भने त्यो महिनालाई मलमास भनिन्छ।
महिनामा दुई वटा सङ्क्रान्ति पर्‍यो भने क्षयमास भनिन्छ। ज्योतिषका विद्वान् भास्कराचार्यले आफ्नो ग्रन्थ सिद्धान्त शिरोमणिमा मलमास र क्षयमासको स्पष्ट परिभाषा दिएका छन्।
अर्थात् सङ्क्रान्ति नभएको महिना अधिकमास वा मलमास हो। दुईवटा सङ्क्रान्ति भएको महिना क्षयमास हो। क्षयमास भने कहिले कहिले मात्र हुने गरेको छ। यसअघि क्षयमास २०२० सालमा परेको थियो ।
क्षयमास कात्तिक, मङ्सिर र पुसमा पर्ने गरेको छ। यसमा पनि बढीजसो मङ्सिर र पुसमा क्षयमास पर्छ। कात्तिक महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्न सक्छ। माघ महिनामा भने क्षय र अधिकमास दुवै पर्दैन। बाँकी आठ महिनामा अधिकमास पर्न सक्छ।
क्षयमास हुने वर्ष दुई अधिकमास नियमितसमेत पर्छन्। यी अधिकमास क्षयभन्दा तीन महिना अगाडि वा पछाडि हुन्छन्। क्षयभन्दा पहिले हुने अधिकमासलाई ‘संसर्प’ र पछि हुने अधिकमासलाई ‘अंहस्पति’ भनिन्छ। सबै मासको देवता हुन्छन्।
अधिकमास (मलमास) मा के गर्ने? के नगर्ने?
मलमास अर्थात् अधिकमासमा नित्य कर्म पूजा, पाठ, जप, ध्यान गर्न हुन्छ। नित्य बसिरहेको व्रत गर्नुहुन्छ। पहिल्यैदेखि गर्दै आएको व्रतलाई नियमितता दिन हुने तर नयाँ व्रतको शुरुआत् भने गर्नुहुदैन।
मलमासको समयमा महादान, माङ्गलिक कार्य अर्थात विवाह, व्रतबन्ध, गृहनिर्माण, गृह प्रवेशजस्ता गर्नु हुँदैन। यसैगरी गर्भाधान गर्नु हुँदैन, पहिले नै गर्भ रहेको भए दोष लाग्दैन। नवविवाहित श्रीमान् श्रीमतीले मलमासलाई छल्नु पर्छ भन्ने परम्परा पनि गर्भाधान गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यतामै आधारित रहेको छ । बृहस्पति र शुक्र अस्त भएका बेला गर्न नहुने जति कर्म मलमासमा पनि गर्नुहुँदैन।
मत्स्यनारायण मन्दिरमा मलमासका समयमा मेला लाग्ने गरेकोमा यसपालि भने मेला भर्न नपाइने भएको छ।
यो महिनामा भगवान् नारायणको पूजा आराधना गर्नाले सम्पूर्ण पाप नष्ट भई पुण्य प्राप्त गरिने विभिन्न धर्मग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। सुनको जलप लगाएको गरुडको कलात्मक प्रवेशद्वार मच्छेनारायण मन्दिरमा छ। माछाको मुखबाट प्रकट भएको एक फिट अग्लो चार हातमा शङ्ख, चक्र, गधा र पद्म लिएको मूर्ति रहेको छ।
भगवान् विष्णुले दश अवतार लिँदा सबभन्दा पहिले मत्स्य शरीर धारण गर्नुभएको थियो। मत्स्यरुपी भगवान्ले प्रलयकालमा समुद्रमा डुङ्गाको काम गरी वेदलाई सुरक्षा गर्नुभएको पुराणमा उल्लेख छ।
मत्स्य अवतारका विषयमा प्रचलित किम्बदन्ती यस्तो छ। प्राचीन कालमा सत्यव्रत नाम गरेका राजाले नदीमा मत्स्य अवतारको सर्वप्रथम दर्शन पाएका हुन्।
सानो माछाले आफ्नो रक्षार्थ बिन्ती गरेपछि राजाले आफ्नो कमण्डलुमा राखेका थिए । कमण्डलुमा माछा अटाएन। माछालाई क्रमशः तलाउ अनि समुन्द्रमा राख्दा आकार बढ्दै गएको गयो । राजाले भगवान् विष्णुको अवतार बुझेर मत्स्य अवतारको पूजा गरे।
पृथ्वी प्रलयको समयमा मत्स्य अवतारले जलमग्न पृथ्वीमा सानो डुङ्गामा बीउबिजनसहित सप्तर्षि अनि राजा सत्यव्रतको रक्षा गरेको कुरा विभिन्न पुराणमा उल्लेख छ। हयग्रिव नाम गरेको राक्षसले वेदलाई चोरेर समुद्रमा लुकाएको थियो। भगवान् मत्स्यले हयग्रिवलाई मारेर वेदको पनि उदार गरेको विश्वास गरिन्छ।
यस वर्ष पितृपक्ष सकिएर दुर्गापक्ष शुरु हुने औँसीदेखि नै मलमास लागेको छ।यसपालीको महान् चाड बडादशैँ एवं तिहार एक महिना ढिला हुने भएको छ। असोज ३० गते मलमास सकिएपछि कात्तिक १ गते घटस्थापना गरी दशैँ शुरु हुनेछ।
यसअघि २०७५ जेठ महिनामा अधिकमास परेको थियो। असोज महिनामै अधिकमास भने विसं २०५८ मा परेको थियो । १९ वर्षपछि फेरि असोज महिनामै मलमास परेको छ।
यस मलमासमा /पुरुषोत्तममासमा विशेष गरी भगवान् पुरुषोत्तमको पूजा आराधना गरी तलका १, १ नाम पढेर ३३ वटा मालपुवा कासको थालमा राख्ने।ॐ विष्णवे नम:,ॐ जिष्णवे नम:,ॐ महाविष्णवे नमः,ॐ हरये नमः,ॐ कृष्णाय नमः,ॐ अधोक्षजाय नमः,ॐ केशवाय नमः,ॐ माधवाय नमः,ॐ रामाय नमः,ॐ अच्युताय नम:, ॐ पुरुषोत्तमाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः,ॐवामनाय नमः, ॐ श्रीशाय नमः,ॐ श्रीकण्ठाय नमः,ॐ विश्वसाक्षिणे नमः, ॐ नारायणाय नमः,ॐ मधुरिपवे नमः,ॐ अनिरुद्धाय नमः,ॐ त्रिविक्रमाय नमः,ॐ वासुदेवाय नमः,ॐ नगद्योनये नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ शेषशायिने नमः,ॐ संकर्षणाय नमः,ॐ प्रद्युम्नाय नमः,ॐ दैत्यारये नमः, ॐ विश्वतोमुखाय नमः,ॐ जनार्दनाय नमः ॐ धरावासाय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ भास्कराय नमः, ॐ श्रीपतये नमः,।यसपछि काँसको अर्को थालले ढाकी पहेंलो वस्त्रले छोप्ने ।त्यसपछि कासको कचौरामा ध्यु र सुवर्ण प्रतिमा,बोहतामा कालो तिल राखी माथिका ३३ नामले पूजा गरेर मालपुवा दान गरे पुण्य मिल्ने धार्मिक विश्वास छ।
स्ववियू निर्वाचन भए पर्वत जिल्लामा अनेरास्ववियूले सबैलाई पत्तासाफ पार्छ (भिडियो)
कोभिडलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर विशेष सुरक्षा योजना
पृथ्वीको नजिक आयो मंगल ग्रह, आज बेलुका ८:०३ बजे हेर्नुहोस्